October 2014 - iftineducation.com
Daawo Dance cusub oo casri ah 2014
iftineducation.com – Daawo Dance cusub oo casri ah 2014 RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
DAAWO aktarad caan ah oo film galmo ah soo jishay yaab
iftineducation.com – DAAWO aktarad caan ah oo film galmo ah soo jishay yaab RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
DAAWO VIDEO:- Muuqaal Yaab iyo Qosol Leh, Gabar Soo Bandhigtay Muuqaal Raga Lama Filaan ku Riday
iftineducation.com – DAAWO VIDEO:- Muuqaal Yaab iyo Qosol Leh, Gabar Soo Bandhigtay Muuqaal Raga Lama Filaan ku Riday RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
DAAWO Justin Beiber oo lagu eedeeyay inuu gabar under age ah u galmooday
iftineducation.com – DAAWO Justin Beiber oo lagu eedeeyay inuu gabar under age ah u galmooday RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA LAYAAB
iftineducation.com – Daawo Gabdho soomali oo markaan kasoo daray waxey sameynaayaan RIIX HALKAAN KA DAAWO ADAA YAABI DOONEE
iftineducation.com – Ma ahan sahal mana fududa in ciidamo aad u hubeeysan oo reer Yurub ah lagu qasbo inay Calanka Soomaaliyeed kor u qaadaan waliba mararka qaar laga dul taago dabaabaadkooda dagaal waxaana fursadaan ka faaideeystay mid ka mid ah Fanaaniinta Soomaaliyeed. Fanaanka Omar Sii Sii Somband oo horay looga bartay heesaha wadaniga ah iyo kor u qaadista karaamada iyo sharafta…
iftineducation.com – Warar dheeraad ah oo is khilaafsan ayaa kasoo baxaya geerida taliyihii hore ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Xasan oo shalay ku geeriyooday Muqdisho. Xalay ayaa ciidamada nabad-sugidda waxay xireen dhaqaatiir Kenyan ah oo ka shaqeenayey isbitaalka UMMAH ee Muqdisho oo taliyaha uu ku geeriyooda. Waxaa arrintaas amray ra’iisul wasaare Cabdi Weli. Inkasta oo tuhunkii xalay uu ahaa in…
iftineducation.com – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa magacaabay Guddiga Wasiiro ah oo ka kooban shan (5) oo beeritaan kusoo sameeya geerida kadiska ah ee ku timid taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxayna kala yihiin. 1. Ra’iisul Wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Mudane Ridwan Xirsi Maxamed (Guddoomiye) 2. Wasiirka Caafimaadka Mudane Cali Maxamed Maxamuud (Xubin) 3. Wasiirka Warfaafinta…
iftineducation.com – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa bilowday baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan Kontenar walxa qarxa iyo dareyska ciidamada lagu cabeeyay lagana soo dejiyay dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Amniga qaranka Khaliif Axmed Ereg ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan Kontenarkaasi, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay qaadayaan howlgallo ballaaran oo lagu ogaanayo cida soo dejisay, halka laga keenay iyo…
iftineducation.com – Ciidamo ka socda Dowladda Talyaaniga oo wata gawaarida gaashaaman ayaa markii ugu horeysay lagu arkay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo bilaabay inay qabtaan howlo ka duwan tan ciidamada AMISOM ay u joogaan dalka Soomaaliya. Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay ilo wareedyo ku sugan gudaha garooItalian-army-2-500x294nka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Talyaaniga ka…